The Lost Husband: New romantic ရုပ်ရှင်သည် Netflix တွင်ထိပ်တန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည် - ပြဇာတ်
The Lost Husband: New romantic ရုပ်ရှင်သည် Netflix တွင်လူကြိုက်အများဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်
Lost Husband New Romantic Movie Is Most Popular Movie Netflix
f သည်မိသားစုရာသီ ၅ ရက်ရက်စွဲဖြစ်သည်
(၂၀၁၁ ခုနှစ် Mammoth ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက် Michael Bezjian / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Stranger Things ရာသီ4သည်ထပ်မံရိုက်ကူးရန်စတင်ခဲ့သလား။ အချိန်ကုန်ဆုံးရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်, အနှစ်ချုပ်နှင့်ပိုပြီး
The Lost Husband သည် Netflix ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ စာရင်းတွင်ပါဝင်နေသည့်အချစ်ဇာတ်လမ်းအသစ်ဖြစ်သည်
ကျော်ရွှေ့ပါ, အနမ်းပြခန်း2။ Netflix ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ စာရင်းတွင်နံပါတ် ၁ ဖြစ်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းအသစ်တစ်ခုရှိသည်။
ပျောက်ဆုံးသွားသောခင်ပွန်း Josh Duhamel နှင့် Leslie Bibb တို့သရုပ်ဆောင်ထားသောယခု Netflix တွင်လူကြိုက်အများဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဒီရုပ်ရှင်ကို ၂၀၂၀၊ 10ပြီ ၁၀ ရက်မှာဖြန့်ချိခဲ့ပြီး Netflix ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကတော့ဒီကပ်ရောဂါနဲ့မကြုံစဖူးသောကာလတွေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရုပ်ရှင်ရုံတွေပိတ်ပစ်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီဟာကဘယ်သူ့ကိုမှကြည့်ခွင့်မရတော့ဘူး ပျောက်ဆုံးသွားသောခင်ပွန်း။
ပျောက်ဆုံးသွားသောခင်ပွန်း ကက်သရင်းစင်တာမှအမည်တူစာအုပ်ကိုအခြေခံသည်။ ဗစ်ကီ Wright သည်ရုပ်ရှင်အတွက်ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီးရေးသားခဲ့သည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်ကြီးစွာသောသွန်းရှိပါတယ်! Sharon Lawrence၊ Nora Dunn, Isiah Whitlock, Jr. Kevin Alejandro, Herizen F. Guardiola, Georgia ဘုရင်နှင့် Carly Pope ကြယ်ပွင့်တို့သည် Bibb နှင့် Duhamel တို့နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
လူစီဖာ ပရိသတ်အသစ်များသည် Kevin Alejandro ကိုရုပ်ရှင်အသစ်၌ကြည့်ရှုရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိကြလိမ့်မည်!
ပျောက်ဆုံးသွားသောခင်ပွန်း သူအပေါငျးတို့က Nicholas Sparks ရုပ်ရှင်နှင့်အတူလက်ျာဘက်တက်ရှိပါတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောရင်ခုန်စရာဒရာမာကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့ရုပ်ရှင်!
သူမ၏ခင်ပွန်းကိုဆုံးရှုံးပြီးနောက် Libby (Bibb) နှင့်သူမ၏ကလေးများသည်သူမ၏အဒေါ်ဆိတ်မွေးမြူရေးခြံသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ အဲဒီမှာသူမကဂျိမ်းစ် (Duhamel) နဲ့ပစ်လိုက်တာ။
ရုပ်ရှင်သည်နံပါတ် ၂ နေရာတွင်ရှိပြီး Netflix Top 10 စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည် အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ, အရာဇူလိုင်လကုန်မှာ Netflix ကအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ စီးရီးများသည်နွေရာသီ၏လူကြိုက်အများဆုံး Netflix ပြပွဲအဖြစ်နိဂုံးချုပ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါပျောက်ဆုံးသွားသောခင်ပွန်းနှင့်အတူရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ တော်တော်လေးရိုင်းတယ် ရုပ်ရှင်အသစ်ကိုကြည့်ပြီးကြည့်ရတာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲပြတယ်။
သင်ဟာစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေထဲကိုဝင်ပြီး Netflix မှာကြည့်ဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ် ပျောက်ဆုံးသွားသောခင်ပွန်း!
နောက်တစ်ခု:၂၀၂၀ မှာအကောင်းဆုံး Netflix ရုပ်ရှင် ၂၀
သည့်အခါပိုမိုကောင်းမွန်ခေါ်ဆိုခ၏ရာသီ4Netflix မှလာသညျရှောလုပါဘူး
တ ဦး တည်းလာကြတယ်လူရာသီ2ဇာတ်သိမ်း
ချိုမြိန် magnolias ဆင်တူပြသသည်
အသစ်ကမိန်းကလေးရာသီ5လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ